Semalt: मेटा ट्यागहरू र Robots.txt फाइलहरूको साथ तपाईंको साइट सामग्रीमा ब्लक पहुँच
जेसन एडलर, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन् कि बिंग, याहू, र गुगल संग साझा के भइरहेको छ को नियन्त्रण गर्न यो सम्भव छ जब तपाईं डाटा सुरक्षित राख्नुहुन्छ र यसलाई इन्टरनेटमा साझा नगर्नुहुन्छ। तपाईंले गोप्य राख्न आवश्यक डाटा मा सम्पर्क जानकारी, पेपैल आईडी, क्रेडिट कार्ड विवरण, प्रयोगकर्ता नाम, र पासवर्ड सामेल छन्। तपाईंले गुगल र अन्य खोजी ईन्जिनहरूमा अनुक्रमणिका हुनबाट यस प्रकारको जानकारी रोक्नु पर्छ। जब यो तपाईंको साइटको URL हरू ब्लक गर्न आउँदछ, सम्भव छ तपाईंको गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूलाई केहि पृष्ठहरू वा लेखहरू क्रल गर्नबाट रोक्न। यसको मतलब जब जब मानिसहरू खोजी परिणामहरू मार्फत जान्छन्, तिनीहरूले देख्दैनन र अवरुद्ध गरिएका यूआरएलहरूमा नेभिगेट गर्नेछन्। साथै, ती यसको सामग्री पहुँच गर्न सक्षम हुनेछैन, र तपाईं गुगलको खोज परिणामहरूमा देखिन धेरै लेख रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको वेबसाइट सामग्रीमा पहुँच कसरी रोक्ने भनेर यहाँ छ।
मेटा ट्यागको साथ खोजी अनुक्रमणिका रोक्नुहोस्: जब तपाईं आफ्नो साइटको एचटीएमएल कोडमा गैर-अनुक्रमणिका मेटा ट्यागहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईं सजीलै पृष्ठहरू खोजी ईन्जिनहरूमा देखा पर्न रोक्न सक्नुहुन्छ। Googlebot पृष्ठहरू क्रल गर्दछ जुनसँग यो मेटा ट्याग छैन र यसका कारण यसको खोज परिणामहरूबाट तपाईंको विशिष्ट पृष्ठहरू खसाल्नेछ। हामीलाई यहाँ बताउनुहोस् कि यो मेटा ट्याग मात्र काम गर्ने छ जब तपाईंको रोबोट्स। txt फाईल परिवर्तन गरिएको छैन।
यूआरएलहरू रोबोट.टक्स्ट फाईलहरूको साथ रोक्नुहोस्: रोबोट्स.टी.टी.एस. फाइल तपाईंको वेबसाइटको मूलमा अवस्थित छ र तपाईंको वेबसाइटको अंश स indicates्केत गर्दछ जुन तपाईं खोजी इन्जिन क्रॉलरहरू र माकुरो अनुक्रमणिकामा चाहनुहुन्न। यसले रोबोट बहिष्करण मानकको प्रयोग गर्दछ, जुन आदेशहरूको सेटको साथ एक प्रोटोकल हो जुन वेब साइटले तपाईंको साइट कहाँ र कसरी पहुँच गर्दछ सूचित गर्दछ। रोबोट्स.टी.टी.टीस्. तस्वीर खोज परिणाम मा देखा पर्न रोक्न मद्दत गर्दछ तर प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो साइटहरु लाई आफ्नो पृष्ठहरुमा लिंक गर्नबाट अस्वीकृत गर्दैन। तपाईंले यो सम्पादन गर्नु अघि रोबोट.टी.टी.टी. फाइलहरूको सीमितता र प्रतिबन्ध मनमा राख्नुपर्दछ। केहि संयन्त्रले यो सुनिश्चित गर्दछ कि URL हरू ब्लक गरिएको छ। Robots.txt का निर्देशनहरू निर्देशनहरू हुन्, जसको मतलब उनीहरूले वेब क्रलरहरूको व्यवहार लागू गर्न सक्दैनन्। सबै क्रॉलरहरूले सिंट्याक्सलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन्, र रोबोट्स। txt फाईलहरू अन्य वेबसाईटहरूबाट तपाईंको लिंकमा सन्दर्भ रोक्न सक्दैन। गुगल रोबोट्स.टी.टी.टी. फाइलहरूको निर्देशन अनुसरण गर्न राम्रो छ, तर यसको नीतिको कारण खोजी ईन्जिनमा रोकिएको वेबसाइटलाई रोक्न सम्भव नहुन सक्छ।
गुगल स्थानीय र गुगल सम्पत्ती अप्ट आउट: तपाईं एक पटक यो अनुक्रमित भएपछि विभिन्न सामग्री गुगल मा प्रदर्शित हुनबाट तपाईंको सामग्री ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गुगल स्थानीय, गुगल उडान, गुगल शपिंग, र गुगल होटलहरू सामेल छन्। जब तपाईं यी सबै आउटलेटहरूमा प्रदर्शित हुने अप्ट आउट गर्न चयन गर्नुहुन्छ, तपाईंको सामग्री जुन क्रल गरिएको थियो सूचीबद्ध वा अद्यावधिक हुनेछैन। यी कुनै पनि प्लेटफर्ममा प्रदर्शित कुनै पनि लेख अप्ट आउट गरेपछि days० दिनमा हटाइनेछ।
तपाइँको आगन्तुकहरुबाट कम मूल्यवान र उपयोगी सामग्री लुकाउन महत्वपूर्ण छ। यदि तपाइँको वेबसाइट मा धेरै स्थानहरूमा यस्तै विषयहरू छन् भने त्यसले खोज इञ्जिनहरू र तपाइँको आगन्तुकहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसैले तपाईंले ती सबै पृष्ठहरू लुकाउनु पर्दछ र खोज इञ्जिनहरूले तिनीहरूलाई सूचक बनाउन नदिनुहोस्। तेस्रो-पक्षबाट सामग्री हटाउनुहोस्। तपाईंले तेस्रो पार्टी सामग्रीबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ जुन कुनै पनि मूल्यमा तपाईंको साइटको लागि मूल्यवान छैन। गुगललाई यस्तो नदेखाउनुहोस् कि तपाईंले तेस्रो-पक्षको सामग्री साझेदारी गरिरहनु भएको छ किनकि सर्च ईन्जिनले तपाईंको साइटमा तपाईंको मूल्यमा कम मूल्य देख्नेछ। जब तपाईले ठूलो संख्याका साइटहरूबाट सामग्री प्रतिलिपि गर्नुभयो, Google ले तपाईंलाई दण्ड दिन सक्छ, र तपाईको नक्कल लेखलाई रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईको गुगल स्तर सुधार गर्न।